TAR Isixhobo sokulungisa. TAR Ukubuyisela isoftware. TAR Lungisa isixhobo.
DataNumen TAR Repair Ingaba i eyona TAR isixhobo sokulungisa kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwihlabathi. Inokulungisa ukonakala okanye ukonakala TAR Oovimba abagcina kuvimba kunye nokubuyisa idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela kuncitshiswa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,642)
Ngoba DataNumen TAR Repair?
Ndithenge isoftware yakho izolo ukufumana kwakhona i-7GB tar ifayile ebiyincwadi yam yonke "yamaXwebhu kunye neeSetingi" ukusuka kwilaptop yam engenayo
UMyili wee-Elektroniki, uMfama, uGqirha, ooMculo
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen TAR Repair v3.0
Inkxaso yokulungisa i-Unix esemgangathweni Tar iifayile.
Inkxaso yokufumana kwakhona Tar iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibatch ye Tar iifayile.
Inkxaso yokulungisa Tar iifayile ezinkulu njenge-2TB (2048GB).
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye Tar iifayile eziza kulungiswa kwikhompyuter yomthengi.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ke unokuzilungisa Tar ifayile kunye nemenyu yokuqulathiweyo yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen TAR Repair Ukufumana kwakhona ukonakala TAR Archives
Xa akho TAR oovimba bonakele okanye bonakele kwaye awukwazi ukuwavula ngesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen TAR Repair ukuskena ifayile ye TAR yogcino kwaye ubuyisele idatha kuyo kangangoko kunokwenzeka.
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala TAR yogcino kunye DataNumen TAR Repair, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokufikelela kwifayile ye- TAR yogcino.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo TAR uvimba oza kulungiswa:
Ungafaka igalelo TAR eligcina igama ngokuthe ngqo okanye ucofe i
iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile yogcino. Unokucofa kwakhona
iqhosha lokufumana TAR Indawo yokugcina enokulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen TAR Repair iya kugcina i-fixed TAR ifayile yogcino njenge-xxxx_fixed.tar, apho i-xxxx ligama lomthombo TAR yogcino. Umzekelo, kumthombo TAR yokugcina eyonakeleyo.tar, indawo yokugcina engagungqiyo iya konakala_iFixed.tar. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lefayile egcinwe ngqo okanye ucofe i
iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile yogcino yogcino.
iqhosha, kwaye DataNumen TAR Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi TAR yogcino. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ngaba umthombo TAR Indawo yokugcina inokulungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku ungavula i-fixed TAR yokugcina kunye nezicelo ezihambelanayo.
DataNumen TAR Repair 2.4 ikhutshwa nge-21 kaDisemba, 2020
DataNumen TAR Repair 2.2 ikhutshwa nge-5 kaNovemba ngo-2020
DataNumen TAR Repair 2.1 ikhutshwa ngoMatshi 8, 2020
Inkxaso yokufumana kwakhona tar iifayile ezenziwe zi-7Zip.
DataNumen TAR Repair 2.0 ikhutshwa ngo-Novemba 16, 2013
Inkxaso yeWindows 7 kunye ne-8.
DataNumen TAR Repair 1.2 ikhutshwa ngoJuni 5, 2005
Ukuphucula ukuchaneka kunye nesantya sokubuyisela.
Ukulungisa kwaye ufumane kwakhona ukonakala Zip kunye neefayile zokuzikhupha (SFX).